वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. २३ अर्बले बढ्यो - Aathikbazarnews.com वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. २३ अर्बले बढ्यो -
जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो।
गत वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। जेठ २७ गतेसम्म निक्षेप बढेर ४३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एनबीएका अनुसार जेठको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले, दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले, तेस्रो साता ७ अर्ब रुपैयाँले र चौथो साता ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
यसैगरी जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी भने ३ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ। गत वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो। जेठ २७ गतेसम्म कुल कर्जा लगानी बढेर ४१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जेठ २७ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ९०.२२ प्रतिशत रहेको छ।–
दुई विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्र सेवक कर्मचारीसहित २०८ कारवाहीमा
नेपाल बैंक-भीमदत्त नगर सहुलियत कर्जा सम्झौता, महिलालाई २.८ र पुरुषलाई ३.८% ब्याजमा ऋण
आइएमई २०७९ मा २०७९ अफर सार्वजनिक, ६० बिजेताले प्रतिव्यक्ति २०७९ रुपैयाँ जित्ने
अजोड इन्स्योरेन्सको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
कोरोना फैलँदै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दियो यस्ता निर्देशन
१ वाणिज्य बैंक सहित २ कम्पनीको ६४ लाख कित्ता बढी शेयर सुचिकृत